CorelDraw - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
24-03-2007, 03:36 AM
ဒါကတော့ Designer တွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ အားလုံးသိကျွမ်းပြီးသားပါ။ လိုအပ်တဲ့ သူများယူလို့ရအောင် တင်ပေးထားတာပါ။
Re: CorelDraw Graphics Suite X3 v13.0
ရှာနေတာခုမှတွေ့ တယ်။ ခုဟာက full version ရလို့လား ကိုရဲနောင်။ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါအုံးနော်။
13-11-2007, 07:33 AM
CorelDrawသုံးသူများအတွက် CorelDraw 11.
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြန်စာ - CorelDraw 11
CorelDraw 11 ဒီမှာ Portable Version တင်ပေးထားတာရှိပါတယ် ။
19-09-2008, 02:54 PM
Corel Designer Technical Suite X4 Multilingual Incl Keymaker
* Corel PHOTO-PAINT® X4
* Right Hemisphere® Deep Exploration™ 5.5 CSE
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 90 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကဲဒီတစ်ခါ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် CorelDRAW Graphics Suite X4 SP2 လေး တင်ပေး လိုက်တယ်ဗျာ…။ ကျွန်တော့သူ ငယ်ချင်းတစ်ချို့ မှာတော့ CorelDRAW Graphics Suite X3 လေးရှိပြီးသား ပါ..။
အခု က သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Version အသစ်လေး တင်ပေးလိုက်တာ ပါ..။
အကျိုးရှိရှိ အသုံး ပြုနိုင်ကြ ပါစေ ဗျာ…။ နေ ရာ နှစ်ခု ကတင် ပေး ပါ့မယ်…။
ကျွန်တော် DL လုပ်ခဲ့တဲ့ နေ ရာ ကလင့်ခ်တွေ ပဲ ပြန်တင်ပေး လိုက် တယ်ဗျာ..။ ကျွန်တော့နက် သိပ်မကောင်းလို့ 
upload လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေလို့ .. ကျွန်တော်ယူလာတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ပဲ ပြန် ပေးလိုက်တယ်..။
တင်းထား ပြီးသားရှိရင်တော့ မသိဘူးနော်... ကျွန်တော်လည်း နေမကောင်းလို့ မရောက်တာ ကြာ ပြီ.. အဆက်အသွယ်ပြတ်နေ တာ...ပေ့ါ..။
serial & crack ပါ ပြီးသား ပါ..။
zip ဖိုင်တွေကို ဖြေဖို့ အတွက်ပါ..။
CorelDRAW Graphics Suite X4.v1.5 Patch
အပ်ဖျားတစ်ထောက်စာ ဒဏ်ရာလေးပေမယ့် ဆပ်ပြာပူပေါင်းအတွက်တော့ ဘ၀ပျက်နိုင်တာဘဲလေ..........:23:
Last edited by sawjonnie; 18-04-2009 at 10:41 AM..
Find More Posts by cheehtoke
18-04-2009, 03:35 AM
ပြန်စာ - CorelDRAW Graphics Suite X4 SP2
ကို cheehtoke mega ကတင်ပေးတာတစ်ပိုင်းလိုနေသေးတယ်အပိုင်း (၅) ကျန်နေသေးတယ်ရှိရင်တင်ပေးလိုက်ပါအုံး.....
Last edited by tu tu; 18-04-2009 at 03:40 AM.. Reason: remove quote
chit moe oo ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by chit moe oo
18-04-2009, 03:45 AM
အပိုင်း (၅) လင့်ခ် ဖြည့်ပေးပြီးပါပြီ။
ပြန်စာ - CorelDRAW Graphics Suite X4
ကျေးဇူးပဲ ကို cheehtoke ရေ..အခုမှပဲစုံလင်သွားတော့တယ်..ကောင်းကောင်းလေ့လာလိုက်အုံးမယ်...
ပို့စ် 157 ခုအတွက် 612 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
CorelDraw Graphic Suite X4 ပါ ... CorelDraw နှစ်သက်သူတွေအတွက် Mediafire နဲ့တင်ပေးထားပါတယ် ... အဆင်မပြေရင် reply တင်လိုက်ပါ ... ပြန်ပြီး upload လုပ်ပေးပါ့မယ် ....
Â• Illustrate. CorelDRAWÂ® X4 is an intuitive vector illustration and page layout application. Whether you'reaprofessional designer or someone who just wants professional results, CorelDRAW X4 gets you there fast.
Â• Layout. With the Interactive Table tool, independent page layers, real-time text formatting previews, and an integrated font identification feature, CorelDRAW X4 helps you lay out your designs faster.
Â• Photo-Edit. CorelÂ® PHOTO-PAINTÂ® X4 is professional image-editing software that lets you quickly and easily retouch and enhance photos. Closely integrated with CorelDRAW X4, it is especially useful inaproduction workflow that includes bitmap photo editing.
Â• Trace. With CorelÂ® PowerTRACEÂ™ X4, you can quickly and easily trace bitmaps, converting them into editable and scalable vector images.
Corel CAPTUREÂ™: Capture images and other content from your computer screen in professional, high quality with this one-click capture utility.
CorelDRAWÂ® ConceptShareÂ™: This valuable online collaboration tool is integrated into CorelDRAW Graphics Suite X4 making it easy for you to share your designs and ideas with colleagues or clients in real time over the Web. Create multiple workspaces, upload your designs, and invite others to provide feedback or submit their own ideas.
WhatTheFontÂ™: This online font identification service from MyFonts.com is integrated into CorelDRAW Graphics Suite X4. Just upload bitmap files to the service, or capture them from web sites with Corel CAPTURE, and WhatTheFont will help identify the font used within the file.
* 1,000 high resolution, royalty-free photographs from iStockphotoÂ®
* 1,000 OpenType fonts, including 75 WindowsÂ® Glyph List4(WGL4) and 10 single-line engraver fonts
:1:[SIZE="4"][COLOR="Red"]ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ မဖြစ်ခဲ့ရင် ဖြစ်လာတာတွေ ဖြစ်ချင်လိုက်မှာပေါ့ .....[/COLOR][/SIZE]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဂျင်မ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဂျင်မ်
coreldraw graphics suite x4.v1.5 patch[/b
ကျေးဇူးပြုပြီး လင့်ပြင်ပေးပါအုံး။ ပြီးတော့ ကီးဂျင် အသုံးပြုပုံလေးပါ ပြောပေးစေချင်တယ်။
Last edited by နှင်းမောင်; 03-06-2010 at 03:17 PM..
နှင်းမောင်, moe san dar, tu tu
ပြန်စာ - CorelDRAW Graphics 11 or 12
CorelDRAW Graphics Suite X5 with Keygen ကို တစ်ပိုင်းကို မက် ၅၀ လောက်စီ ခွဲပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် - အသုံးပြုနည်းကတော့ အထဲမှာ တစ်ခါတည်း Notepad နဲ့ ရေးထားတာ ပါပါတယ် -
Download CorelDRAW Graphics Suite X5 with Keygen
CorelDR_Graphics_X5.part01.rar (47.68 MB)
CorelDR_Graphics_X5.part02.rar (47.68 MB)
CorelDR_Graphics_X5.part03.rar (47.68 MB)
CorelDR_Graphics_X5.part04.rar (47.68 MB)
CorelDR_Graphics_X5.part05.rar (47.68 MB)
CorelDR_Graphics_X5.part06.rar (47.68 MB)
CorelDR_Graphics_X5.part07.rar (47.68 MB)
CorelDR_Graphics_X5.part08.rar (47.68 MB)
CorelDR_Graphics_X5.part09.rar (47.68 MB)
CorelDR_Graphics_X5.part10.rar (47.68 MB)
CorelDR_Graphics_X5.part11.rar (9.71 MB)
Last edited by tu tu; 06-02-2011 at 09:23 PM..
ပြန်စာ - CorelDraw
CorelDRAW Graphics Suite X5 with Keygen ကို ပြန်တင်ပေးပါဦးနော်...... Invalid file ဖြစ်သွားလို့ပါ.......... အသုံးပြုပုံ စာအုပ်လေးပါ တင်ပေးပါနော်......
29-12-2012, 06:54 AM
CorelDRAWX4 and Keygen
မြန်မာမိသားစု မှ မိသားစုဝင် အားလုံးအတွက် ကျွန်တော်သိသလောက် မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းပါဗျာ
CorelDRAWX4 and Keygen RAR ဖိုင် ထဲ တွင်
၃။COREL DRAW X4 Trail ကို FULL VERSION လုပ်နည်း PDF ဖိုင်(မြန်မာလို ပုံနှင့်တကွ ရှင်းပြထားပါတယ်)
၄။ Corel_Draw_X4 (MYANMAR) PDF ဖိုင် (သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) ရေးသောစာအုပ်ပါ)
တို့ ပါဝင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
PS. ဖိုင် ၄ ခုလုံးဒေါင်းပြီးမှ RAR ဖိုင်ကို Extract လုပ်ပါ။
Last edited by ko gyi aung; 29-12-2012 at 07:09 AM..
CorelDraw Ebooks & Training Video tu tu E-books များ 23 12-12-2011 10:54 AM